Cristiano Ronaldo oo ficil yar mar kale ku kasbaday qalbiyada dadka ka hor final-ka UEFA Nations League – Muxuu Sameeyay? – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo ficil yar mar kale ku kasbaday qalbiyada dadka ka hor final-ka UEFA Nations League – Muxuu Sameeyay?
(Portugal) 09 June 2019. Weeraryahanka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa mar kale kasbaday qalbiga dad badan kadib markii uu sabtidii sameeyay ficil loo riyaaqo, xiddiga Juventus ayaa joojiyay bus-ka ay saarnaayeen xiddigaha qarankiisa si uu sawir ula galo wiilyar oo la ildaran kansar.
Xulka Portugal iyagoo jooga ciidooda ayey isku diyaarinayaan final-ka tartanka UEFA Nations League, waxeyna kaga hor imaanayaan dhigooda Netherlands.
Sabtidii ayey go’aansadeen iney tababar yar ku sameeyaan Estadio do Bessa ee ku yaala Porto, balse markii ay dib uga soo laabteen iyagoo kusii jeeda hotel-ka ayuu kabtanka arkay wiilyar oo sita boor uu kaga dalbanaayo inuu hab siiyo.
11-jir lagu magacaabo Eduardo Moreira ayaa noqday mid laga bartay dunida, waa mid la ildaran kansarka dhiiga, wuxuuna soo qaatay boor lagu qoray: “Cristiano hab isii”
Sida lagu qoray warsidaha Flash ee kasoo baxa Portugal, kabtanka ayaa amray wadaha gaariga inuu joojiyo si dhaqso leh, wuxuuna shaqaalaha amaanka qaranka ka codsaday in wiilka yar lasoo saaro bus-ka.
Sawiro ayaa laga soo bandhigay wiilka yar, Cristiano Ronaldo ayaana maaweeliyay wiilka yar oo muddo 10-sano ah la ildaran xanuunka uu qabo.